के हजुरलाई गर्मि महिनामा प्रयोग हुने यी बेसिक जापानी शब्दहरु थाह छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > के हजुरलाई गर्मि महिनामा प्रयोग हुने यी बेसिक जापानी शब्दहरु थाह छ ?
जापानको गर्मि महिना जुन बाट सुरु भएर सेपटेम्बर महिना सम्म रहन्छ। हजुर जापानमा बसेको ठाउ अनुसार यहाँको गर्मि ह्युमिड र चिप चिप गर्ने वा जाडो बाट छुटकारा पाएर न्यानो मौसम हुने खालको हुन्छ। यदि हजुर होकाईदो र आओमोरि क्षेत्रमा बस्नु हुन्छा भने पक्कै पनि गर्मि महिनाको न्यानो घाम र उज्यालो दिनलाई मन पराउनु हुनेछ। तर यदि हजुर टोकियो जस्तै अन्य सहरमा बस्दै हुनुहुन्छ भने गर्मिको पिडा बेग्लै हुन्छ। अन्य सहरको गर्मि तातो हावा र अत्याधिक ह्युमिडिटिले टिक्न नसकिने हुन्छ। जापानको गर्मिमा प्रयोग गरिने केहि शब्दहरु के के हुन् त ?
आचुई भनेको तातो हो। हजुरले यो शब्द जापानीको मुख बाट गर्मि महिनामा प्रत्यक दिन सुन्नु हुनेछ। आचुई एक शब्द मात्र नभएर जापानीहरुको अभिव्यक्ति पनि हो। बिदाको दिन जापानीहरु गर्मि याममा पार्कको शितलमा बसिरहेका हुन्छन। बाटोमा हजुरले थुप्रै जापानीहरु हाते पंखा (सेंसु) बोकेर हिडेको देख्न सक्नु हुनेछ। हजुर्पानी जापनीले आचुई भन्दा तोतेमो आचुई भंदिनुस, जसको अर्थ धेरै गर्मि हो।
जापानमा जुन मनसुनको महिना हो। मनसुनलाई जापानमा चुयु भनिन्छ। जापानको मनसुन तातो हावा लाग्ने र निकै ह्युमिड हुने गर्दछ। यो महिना यदि हजुर आऊट डोर केहि प्लान गर्दै हुनु हुन्छ भने सुरुमै मौसम छेक गरेर मात्र प्लान गर्नु होला।
जापानको गर्मि आतिसबाजीको महिना पनि हो। यसलाई जापानीमा हानाबी भनिन्छ। हानाको अर्थ फूल र बि (हि)को अर्थ आगो हो। आतिसबाजी आकाशमा आगोको फूल जस्तै देखिने भएकोले हानाबि भनिएको हो।
यदि हजुरलाई हानाबी मनपर्छ भने सुमिदा रिभर फाईरवर्क फेस्टिभल, ओमागारी नेसनल फाईरवर्क कम्पिटिसन र नागाओका फाईरवर्कस हेर्न नछुटाउनुस।
“मुशी” भनेको जापानीमा किरा हो। त्यसैगरि मुशीको अर्को अर्थ “बाफ” पनि हो। किराहरु गर्मि याममा धेरै निस्कने हुनाले जापानको सब अर्बमा बस्ने हरुले पक्कै पनि किरा देख्न र आवाज सुन्न सक्नु हुनेछ। जापानका केहि किराहरुमा गोकिबुरी ( साङ्ग्ला), कुमो (माकुरा) , खामेमुशी(गुईए किरा)हरु पर्दछन। किराहरु धेरै आउने वा बाफ निस्किने गरि गर्मि हुने भएकोले जापानीहरु “मुशी आचुई” भन्दछन।
ओबोन धेरै जसो तिन दिनको हुन्छ। ओबोन मध्य अगस्ट तिर पर्दछ। २०१९को ओबोन अगस्ट १३ देखि १५ सम्म छ। यो समयमा कम्पनिमा काम गर्न सहर बसेका फ्यामिलीहरु आफ्नो गाउ जाने गर्दछन। ओबोनमा जापानीहरु आफ्नो बितेका पुस्तालाई सम्झिनछन्। टोकियोका थुप्रै मानिसहरु ओबोनमा गाउ जाने हुनाले टोकियोको भिड कम हुने गर्दछ।
ओबोनको बेला घुम्न कतै जानेहरुले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहि यो समय होटेलहरु निकै महँगो हुने गर्दछन। ओबोनमा बोन ओदोरि फेस्टिभल पनि हुने गर्दछ। यो एक बिशेस प्रकारको नाच हो।
यो किरा पक्कै पनि हजुरले नेपालमा पनि देख्नु भएको होला। सेमी भनेको नेपालीमा झ्याउकिरी हो। अगस्ट महिनाको अन्त्य तिर यो किराको आवाज जापानमा सबै तिर सुन्न सकिन्छ। यिनीहरु रुखमा बसेर कराउदछन। यो गर्मि महिनाको अन्त्यको संकेत हो। यिनीहरु कराउन थाले पछि गर्मि बिस्तारि हट्दै जाने र चिसो मौसम सुरु हुने भनिन्छ।
नाचू भनेकोनै गर्मि हो। नाचूमा मनसुन हुने, किरा आउने, चिप चिप उने भएता पनि जापानीहरु नाचूमा धेरै ईभेण्टहरु गर्दछन। धेरै जस्तो ओमाचुरी (मेला) पनि नाचूमै हुने गर्दछ। यो मौसममा जतापनि गर्मि हुने हुनाले जापानीहरु बिदा हुने बित्तिकै पार्कमा निस्किने, बीच जाने, बार्बिक्यु गर्ने, खर्बुजा(सुइका) खाने गर्दछन। नाचूमा मन पराइने अर्को कुरा हो खाकीगोरी। यो आईस गोला हो। बच्चा देखि वयस्क सम्मले नाचूमा खाकिगोरी खान्छन।
गर्मीमा पनि जापान घुम्न आउनु भएकाहरुले उत्तिकै रमाइलो गर्न सकिने भएकोले पिर नगर्नुहोस। माथिका केहि गर्मीमा प्रयोग हुने शब्दहरु हजुरलाई पक्कै कामलाग्ने आशा गर्दछौ।
शिन्जुकुको यी ४ ठाउँ जसले प्राचिन जापानको झझल्को दिनेछ
भाषा र संस्कृति एउटा देशलाई चिनाउने सबै भन्दा बलियो पक्ष हो। ति भाषा मा बोलिने कुनै शब्दावली यस्ता हुन्छन जुन बोलिद धेरै प्रयोग मा आऊछन। जापान घुम्न या पढ्न आउने जो कोहि ले सुनी रहने त्यस्ता शब्दहरु भन्नु पर्दा कावाई (राम्रो), सामुइ (जाडो), आचुइ (गर्मि), ने ( हैन त), आरिगातोउ (धन्यबाद), माता ने ( फेरी…
जापान अध्ययनको शिलशिला होस् वा कामको शिलशिला होस, अलि लामो समय बस्ने आउने सबैले कल्चर शक पक्कै भोग्नु भएको होला।हजुरको घर वा ठाउमा सामान्य लाग्ने कुरा जापानमा गर्दा अभद्र हुने वा हजुर को तिर असभ्य मानिने कुरा यहाँ सबैले गर्ने देख्दा पक्कै पनि अचम्म लाग्दछ। एक त नया ठाउमा सेट हुने समय लाग्दछ, त्यो माथि…